Fanavaozana manaraka ny Pokémon GO miaraka amin'ny Pokémon Gold sy Silver vaovao | Vaovao IPhone
Angel Gonzalez | | Lalao IPhone
Notantarainay anao ny herinandro lasa teo hetsika manokana ny Pokémon GO hankalaza ny Andron'ny mpifankatia izay mifarana anio amin'ny 20.00:XNUMX alina. Tsy azontsika lavina fa Niantic, mpamorona ny lalao, dia tokony hitandrina rehefa mampiditra endri-javatra vaovao hahasambatra ireo mpampiasa mazoto izay mandeha an-tongotra kilometatra maro kilaometatra maro vao hahita pokémon vaovao.
Ora vitsy lasa izay, nanambara i Niantic endri-javatra vaovao, asa ary pokémon amin'ny fanavaozana Pokémon GO ho avy. Ity fanambarana ity dia niteraka hafanam-po tamin'ireo mpankafy tsy mivadika indrindra amin'ny lalao, izay dodona ny hahita zavaboary vaovao hampitombo ny Pokédex-ny.
Ny fanitarana Pokémon GO: pokémon vaovao
Ny fanambarana lehibe indrindra an'ny Pokémon GO dia natao tamin'ny alàlan'ny tranokala Niantic Labs ofisialy. Manangona ny fampahalalana rehetra momba ny lalao sy ireo fanavaozam-baovao rehetra amin'ny fiteny samihafa ity tranonkala ity. Amin'ity tranga ity dia namoaka fanambarana mampahafantatra izany ny mpandrindra "Manitatra ny Pokémon GO":
Chikorita, Cyndaquil, Totodile, ary Pokémon maro hafa dia efa akaiky eto! Manomboka amin'ity herinandro ity dia hanana fotoana ahafahana misambotra Pokémon mihoatra ny 80 hita tany amin'ny faritra Johto ianao tamin'ny lalao video an'ny Pokémon Gold y Pokémon Silver. Nampiditra fiasa vaovao sasantsasany koa izahay hanatsarana ny zavatra niainanao Pokémon GO.
Raha fintinina, ny mpilalao Pokémon GO dia afaka mahatratra Pokémon vaovao 80 amin'ny taranaka volamena sy volafotsy. Mbola fitaovana hanandramana io alefaso indray ny lazan'ny lalao amin'ny fahavaratra.
Etsy ankilany, ireo fiasa vaovao izay ho hita ao amin'ny fanavaozana dia ireto manaraka ireto:
Fivoarana vaovao: rehefa maneho hevitra ao amin'ny tranonkala ofisialy izy ireo, "Misy fotoana bebe kokoa ahafahana manatsara ny Pokémon anay". Ho fanampin'izany, ao amin'ny poképaradas dia hahita zavatra vaovao hivoatra pokémon sasany isika, asa vaovao iray amin'ny lalao.
Lalao lalao: rehefa mahita pokémon dia isika dia ho hitantsika fa nahazo sary mihetsika vaovao izy ireo. Etsy ankilany, ny fandaminana ny efijery dia novaina, nahatonga ny voaroy sy ny baolina poké mora azo kokoa.
Voaroy vaovao: Ao amin'ny poképaradas isika dia hahita voaroy roa vaovao hamahana ireo pokona hisambotra azy ireo: voankazo latano, izay hampiadana ny fihetsiky ny zavaboary; voankazo mananasy, izay hahatonga ny vatomamy azo avo roa heny raha azo am-pahombiazana ny pokémon amin'ny mpilalao manaraka
Akanjo vaovao: Ny fanaingoana ny avatar dia ho mora kokoa ankehitriny ary hanisy akanjo vaovao: satroka, t-shirt, pataloha ...
Toa napetrak'i Niantic ireo batery ary nanomboka niasa tamin'ny fomba lehibe izy. Ho hitantsika ny fomba nivoaran'ny fanavaozana rehefa niseho tao amin'ireo magazay fampiharana. Amin'ny fotoana mety.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Pokémon GO dia manitatra: pokémon vaovao sy fisehoana hita eo imasony
Apple hanohitra ny soso-kevitr'i Nebraska "Zo hanamboarana"